I-Autopilot ivula iiNgcaciso, iTracker yeTyelelo loMthengi kubathengisi | Martech Zone
I-Autopilot ivula iiNgcaciso, iTracker yeTyelelo loMthengi kubarhwebi
NgoLwesithathu, Juni 7, 2017 NgoMvulo, nge-7 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
I-82% yabathengi bayeka ukwenza ishishini nenkampani kwi2016 emva kwamava amabi ngokutsho Ingxelo kaMary Meeker yeTrends yeNgxelo yakutshanje. Ukunqongophala kwedatha kunye nokuqonda kungathintela abathengisi ukuba baqhubele phambili kwimisebenzi yabo: idatha entsha ibonisa ukuba Isinye kwisithathu sabathengisi abanalo idatha kwaye kubahlalutyi Kufuneka bavavanye ukusebenza kwabo, kwaye i-82% ithe ngcono kubahlalutyi ingabanceda baqhubele phambili kwikhondo lomsebenzi wabo.
I-Autopilot ivula ulwazi
yalawa sele iqalile nokuqonda - umkhondo wokuqina komzimba wabathengisi ubanceda babeke, balandele, kwaye bafezekise iinjongo nokuqonda ibonakalisa iinjongo ezithile kunye neemetwork eziphambili (ukusayinwa kwe-imeyile, ukuya kwimisitho, njl.njl.), Ukufumanisa ukuba yeyiphi imiyalezo kunye namajelo asebenzayo, kwaye isandula kusetyenziswa liQela lonjiniyela lakwaMicrosoft ngaphambi konyaka wabo YAKHA Inkomfa yokulandela kunye nokudibana neenjongo zabo zokubhalisa.
nokuqonda ibonelela ngendlela yokuba abathengisi babenombono kunye nokulandelela ukusebenza kohambo lwabathengi babo ngokuchasene nenjongo, kufana nokusetyenziswa kokulandela umkhondo womzimba. Kwimizuzwana engama-60, abathengisi banokulandela umkhondo amajelo ophumeleleyo, iimetrikhi, kunye nemiyalezo efunekayo yokuguqula ingeniso ethe kratya kunye nokwenza ukuba amava abe ngcono.
Ngaphezulu kwe700 yalawa abathengi bathathe inxaxheba kuvavanyo lwangaphambi kwexesha lweeNkcukacha, ngaphezulu kwesiqingatha besithi Ukuqonda kubancede kakhulu bonyusa ukusebenza kohambo, kwaye iipesenti ezingama-71 bathi ngoku baziva bezithembile kwimpembelelo yentengiso yabo.
Ngee-Insights, ndikwazile ukungena kwi-minutia yenyathelo ngalinye kuhambo lwethu kunye nokwandisa oko bekusebenza. Bekulungile ngokwenene ukudibanisa ukukhula okuqhubekayo nesebe lethu lokuthengisa ukubuyela kuhambo lokondla kwi-Autopilot. UKevin Sides, uCMO we I-Shipmonk
Ulwazi oluphambili Amandla aBandakanya
Ukulandelela kweenjongo: Ukuqonda kunceda ekuhlanganiseni amaqela ajikeleze iinjongo eziphambili zeshishini ngokuvumela abasebenzisi ithuba lokwenza, ukufezekisa, kunye nokwabelana ngeenjongo zabo zokuguqula uhambo kunqakrazo olumbalwa.
Iinguqu zokuguqula: Ungaze ulahle ukugxila kwinjongo yokugqibela-ukuguqula. Jonga imeko yokuguqula kwaye ubone ukuba ngubani, kwaye ngokukhawuleza kangakanani, umntu oguqula kulo naliphi na ijelo ukusuka kwi-imeyile ukuya kwikhadi leposi.
Ukusebenza kwe-imeyile ngokubanzi: Jonga ukuba ii-imeyile zakho ziqhuba njani kwaye zihamba njani kuluhlu oluphezulu, kwinqanaba lokuhamba. Chonga amaxesha aphambili kunye neentsuku zeveki zokuthumela ii-imeyile ngokujonga iziphumo kunyuso olwahlukeneyo, kwaye ufumane nokuba nzulu njengokusebenza kwenqanaba leyure.
Chonga imiyalezo ephumeleleyo: Qhuba kwiziphumo zomyalezo ngamnye, zemigudu emininzi mihla le. Thelekisa ngokulula iimvavanyo ze-A / B kwaye uchonge abaphumeleleyo.
I-Autopilot yisoftware yokuthengisa ebonakalayo yokuhamba ngokuzenzekelayo kubathengi. Ngokudityaniswa kwendalo ne-Salesforce, iTwilio, iCandelo, iSlack, kunye neZapier kunye nokukwazi ukunxibelelana nezixhobo ezingaphezu kwe-800 ezenzelwe iinjongo, sixhobisa abathengisi ukuba bakhulise ubudlelwane kunye nokukhulisa abathengi abahlawula kakhulu besebenzisa i-imeyile, iwebhu, iSMS, kunye nemijelo yeposi ngqo. .
tags: UhlalutyoI-autopilotuhambo lwabathengiUkulandelwa kohambo lwabathengiukulandelela iimeyileulwaziukuthengisacandeloMusaTwiliozapper
Ukulandelela iifowuni ezifowunelwa kuPhando lweOrganic kunye nePeyiweyo